Kushanya Kwechokwadi - Prairie Cardiovascular
Ronga zuva rako rimwe chete uye rinotevera zuva rekushanya chaiko.
Dzvanya PANO KUFANA 1-888-477-2474
Kugadzwa kwakavanzika uye kwakachengeteka kubva mukunyaradza uye nyore kwemba yako, zvichiita kuti zvive nyore uye zvakachengeteka kwauri kuti uwane yako Prairie Chiremba uye APC usingauye muhofisi.
Kufambidzana munharaunda chikamu chakakosha mukudzikisa kupararira kweCOVID-19. Izvi zvinoreva kuti hazvina njodzi kunharaunda kana tikangounza varwere muhofisi kana zvichidikanwa. Pane dzimwe nyaya dzatinoda kuona murwere takatarisana, toda kupa varwere ava nzvimbo isingatapurwe nekutapurira vanhu vatinoona mukiriniki medu. Kushanya kwehofisi kweVirtual kunotibatsira tese kutsigira kufambiswa kwemagariro kune hutano hwako uye chengetedzo pamwe neiyo yenharaunda yakakura.
Q: Marii yekushanyira hofisi chaiyo inodhura?
Kushanya kwehofisi chaiko kunoda muripo wakafanana sekunge uri kuona Chiremba wako uye APC muhofisi. Isu tinokukurudzira kuti ubate kambani yako yeinishuwarenzi kuti uwane ruzivo rwekuti yakawanda sei yavanovhara kune chaiyo yekushanya kwehofisi.
Mubvunzo: Chiremba wangu neAPC vanogona kundinyorera mushonga kuburikidza nekushanya kwangu kwefoni?
Ehe. Panguva yekushanya kwako, Chiremba wako neAPC vachakwanisa kuwana marekodhi ako ekurapa, kukupa mushonga uye kuodha chero masevhisi sezvavaizoita mukushanya kwehofisi kwakajairika.
Mubvunzo: Chii chandinoda pakushanya kwehofisi chaiyo?
Iwe unozoda mudziyo wakangwara (senge smartphone, piritsi kana komputa ine kamera uye yekuteerera kugona). Varwere vasina mudziyo wakangwara une vhidhiyo sarudzo vanogona kutaura nehofisi yachiremba wavo nezve maitiro avangaita mamwe marudzi ekushanya.
Ndokumbirawo uve nerondedzero yako yemishonga uye chero rumwe ruzivo rwaungagovana nachiremba wako mukushanya kwakajairwa kuhofisi.
Mubvunzo: Kugadzwa kwangu kuchatora nguva yakareba sei?
Hurefu hwekushanya kwako huchasiyana zvichienderana nehutano hwako Chiremba uye APC uye chikonzero chekugadzwa kwako.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge warongerwa kurongeka unokodzera, hofisi yedu inokubata iwe kuti uendese kushanya kwako kune chaiyo hofisi yekushanya. Kana uchida kuronga nguva yekusangana, ndapota fona 1-888-4-PRAIRIE (1-888-477-2474).
MyChart ndeye yedu yakachengeteka yepamhepo murwere portal kuti uwane uye ubate ruzivo rwako rwehutano kuburikidza nekombuta yako kana smartphone ine Prairie. Dzidza maitiro ekuita account yako nekudzvanya bhatani.